ယွန်းယွန်းနဲ့အုပ်စိုးခန့် တို့ ချစ်သူသက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ဓာတ်ပုံ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ပျံ့နှံ
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် အကယ်ဒမီပါရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းနဲ့ လူငယ်အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့်တို့ဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုပြီး ကောလဟလတွေထွက်နေတာ အချိန်တစ်ခုခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ယွန်းယွန်းကိုကြိုက်ပါတယ်တွေရော ချစ်သူမဟုတ်ပါဘူးတွေရော အားပေးပါတယ်တွေရော ရှုပ်ယှက်ခတ်နေအောင်ဖြေခဲ့ဖူးပြီး ယွန်းယွန်းကတော့ ငယ်သေးလို့ ကလေးပဲရှိသေးတာမို့ အချစ်ရေးကိုမစဉ်းစားသေးပါဘူးလို့ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီကပဲ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ယွန်းယွန်းတို့နှစ်ယောက်က ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာရဲ့ သက်သေလို့ဆိုနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံက ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ ယွန်းယွန်းကို အုပ်စိုးခန့်က …
အမိုက်စားဖန်တီးမှုတွေပေါင်းစပ်ကာ အကြမ်းစားရိုက်ချက်တွေနဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်နဲ့ ဟိန်းမင်းသူတို့ရဲ့ You’re The One သီချင်းဗီဒီယိုဖိုင်
ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီးချော သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ လက်ရှိမှာ ချောင်းသာကမိးခြေကို ရောက်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာ ဘယ်သူမှမဝတ်ဖူးတဲ့ အမိုက်စား၊ အကြမ်းစား ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ သင်ဇာက ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို အဖမ်းစားဆုံး အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် လှပလွန်းနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဖက်ရှင်တိုင်းက sexy ကျကျဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ …
၅ နှစ်​တာ ပတ်​သတ်​ခဲ့ရတဲ့ ချစ်​သူရဲ့လမ်းခွဲခြင်းခံလိုက်​ရတဲ့ မထက်
မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကြီးမိတ်ကပ် ပညာရှင် ဖြစ်တဲ့ မထက်ကတော့ ပရိသတ်တွေကြား အရမ်းကိုနာမည်ကြီး လှပါတယ်။ ပြင် ဆင် ခြယ် သမှု တွေဟာ အရမ်းကိုမှ ရေပန်းစားတာ ကေ့ာင့်ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားလှပြီး သူမရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံဟာလည်း ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူတစ်ဦး လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ သူမရဲ့ အချစ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ …
မြို့လည်ခေါင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေသလား ထင်ရအောင် အပီ ကြမ်းနေတဲ့ Line Walker2ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများ
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Line Walker2ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ မြန်မာသရုပ်ဆောင် သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ အောင်မြငိ့မြတ်၊ လင်းအောင်ခေတ် နဲ့ Hugo တို့ကလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Line Walker2ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဒါရိုက်တာတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အနုပညာတွေ …
သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်နဲ့ ကိစ္စမှာ မနန္ဒာလှိုင်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ သင်းသင်း
February 22, 2019 February 23, 2019 - by admin - LeaveaComment
သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲတဲ့ကိစ္စမှာ မနန္ဒာလှိုင်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ သင်းသင်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဝေဠုကျော်ကို တရားစွဲမယ့် သင်းသင်း တို့ရဲ့ သတင်းက အနုပညာလောကမှာသာမက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူ တော်တော်များများ သိနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သူမက တရားစွဲမယ့်ပြသနာကြောင့် လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှမယ် သင်းသင်း က သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော် အား …
အလှမယ် သင်းသင်းကတော့ မင်းသား ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကိုတော့ တော်တော်များများ သိပြီးကြမှာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလှမယ် သင်းသင်းကတော့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှု များစွာ ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင်နန္ဒာလှိုင်မှာ ဆွဲထည့်ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နန္ဒာလှိုင်ကတော့ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ “တချိန်က ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့သူဆိုတာ ရန်သူမဟုတ်သလို ချစ်သူလဲ …
မန်မာနိုင်ငံဟာ ခုဆိုရင် အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ အစရင်ဘောင်တန်းလျက် ရှိနေပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကို အထူးခံရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင် အနုပညာပိုင်းမှာ အရင်ကထက် ကြိုးစားမှုတွေအများကြီးတွေ့ရသလို ပိုပြီးတိုးတက်လာတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံးမင်းသမီး (၁၀)ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်ပါရဲ့လား ပြောခဲ့ပါဦး။ (၁၀) မေမြင့်မိုရ် (၉) စံရတီမိုးမြင့် (၈) ခင်ဝင့်ဝါ(၈) ခင်ဝင့်ဝါ (၇) နန်းဆုဦး …
အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်လို ဘော်ဒီအချိုးအစားလေးနဲ့ အရင်ကထက် ပိုလှလာတဲ့ အိချောပို
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို မနားတမ်းရိုက်ကူးနေရသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးအိချောပိုကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ ရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုကတော့ မကြာခင်မှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် “ဝက်ဝက်ကွဲအောင်ပွင့်”ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ အထူးပွဲကိုလည်း ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ” ဒီနေ့ ” ဝက်ဝက်ကွဲအောင်ပွင့် ” Red Carpet ပွဲလေးတက်ရောက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်…🍀အောင်မြင်ပါစေ..” …
ဒီကနေ့တတိယအကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းကိုတက်လာတဲ့ ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်မှု တရားစွဲထားတဲ့ သင်းသင်း
ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဝေဠုကျော်ကို တရားစွဲမယ့် သင်းသင်း တို့ရဲ့ သတင်းက အနုပညာလောကမှာသာမက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူ တော်တော်များများ သိနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သူမက တရားစွဲမယ့်ပြသနာကြောင့် လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှမယ် သင်းသင်း က သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော် အား ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ (၄၁၇) ဖြင့် တရားစွဲဆို တိုင်ကြားထားသည့် …
Line Walker2နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ ယုန်လေး…
Line Walker2လာရိုက်တာ ကြိုဆိုပါတယ် .ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရိုက်တဲ့အတွက် ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကိုလည်း Line Walker2ကြည့်တဲ့သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုတာသိသွားတာပေါ့ လမ်းတွေ ပိတ်ပေးတယ် . ရဟတ်ယှဉ် တွေနဲ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဆူးလေ ဘုရားရှေ့မှာ စင်းမယ် . မိုက်တာပေါ့ ပရိတ်သတ်အဖြစ်လည်း ရုံတင်ရင် ရှေ့ဆုံးက …